China Soy Peptide orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Yasin
Proteinina soja dia proteinina iray mitokana amin'ny soja. Izy io dia vita amin'ny sakafo soja izay efa maloto sy nalalaka. Ny peptide molekiola kely dia nalaina avy tamin'ny proteinina soja tamin'ny alàlan'ny teknolojia fandevonan-kanina ny anzima fitarihana sy ny teknolojia fisarahana manara-penitra. Raha ampitahaina amin'ny proteinina soja, ny peptides soja dia mora vitan'ny vatan'olombelona fa tsy mampitombo ny enta-mavesatra amin'ny taovam-pandevonan-kanina. % etsy ambony, asidra amine 8 ilaina amin'ny vatan'olombelona tanteraka. Ny peptide soja dia manana fananana ara-tsakafo tsara ary fitaovana ara-tsakafo manome sakafo mahomby.
Fitsapana miorina amin'ny
Vovoka fanamiana, malefaka, tsy misy moka
Vovoka mavo fotsy na mavo
Manana ny tsiro sy fofona miavaka an'ity vokatra ity, tsy misy fofona hafahafa
Tsy misy fahalotoana exogenous hita maso
100% dia mamakivaky sivana miaraka amin'ny zana-kazo 0,250mm
（G / mL） Fametrahana dity
（% ， Fototra maina） Proteinina
（% ， Fototra maina） atin'ny peptide
≥80% be loatra molekiola peptide
（Mg / kg. Atin'ny sôdiôma
（CFU / g） Bakteria tanteraka
） CFU / g） bobongolo sy masirasira
Tabilao mikoriana ho an'ny famokarana soja Peptide
1) Fampiasana sakafo
Ny proteinina soja dia ampiasaina amin'ny sakafo isan-karazany, toy ny fitafiana salady, lasopy, analogue hena, vovo-pisotro, fromazy, crème nond milk, tsindrin-tsakafo mangatsiaka, fonosana nokapohina, raikin-jaza, mofo, serealy maraina, pasta, ary sakafo biby.
2) Fampiasana miasa
Ny proteinina soja dia ampiasaina amin'ny emulsification sy texturizing. Ny fampiharana manokana dia misy adhesives, aspalta, resins, fitaovana fanadiovana, kosmetika, inks, pleather, loko, fonosana taratasy, pesticides / fungicides, plastika, polyesters, ary fibre lamba.